May 14, 2019 garoowe Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 6
Ehelada ay ka soo jeedaan Sadex nin oo ay Maxkamad ku heshay in ay ahaayeen dadkii ka dambeeyey dilkii, Afduubkii iyo Kufsigii foosha xumaa ee loo gaystay Caasho Ilyaas Aden ayaa diiday xukunkii Maxkamadda,
Waxayna sheegeen in aysan marnaba raali ka noqon doonin, Wiilashooduna aysan xaqba u laheyn in la dilo.
Subxaana laahi. War ilaahay ka cabsada oo dambiilayaal dulmi xun galay ha difaacinina
Kufsiland,,, waa af ka nool wax sharci ah kama jiro.
ahmed muuyo says:
hello odeyasha walan waxa ushegayah ragas wa ladognah maxa qadi gardi share cada islam waxey dhigah in la dogdo wa xaq qofki qof dilah gabarti yarda ragi o kufsi iyo dil ugasdan miya mantay u so hilineysani odeyasha waxa ushegayah afkina qabsada intas aya hadalkeyga ugu baxey bye
Maskiin Daarood says:
Jaw!!! Raggaan la soo eedeeyay waa rag laandheerayaal ah.
Maxakamad waxeey sheegeyso baa iska yar. KKKk
Raggaan waxey u dhasheen reer Mahad, Cumar Maxamuud, Maxamuud Saleebaan, Boqoradii Daarood.
Maxkamad iyo Shareecada aad sheegeysiin waa maxay? Wax kasto dhalashadeena baa ka weyn.
Ha noolaado Boqorka Daarood
Rag uu dhiiggoodu yahay Daarood asal ah falalkan waxshinimada ah abid kama aanay suuroobeen ee kuwani dhiig qalaad baa ka buuxa marka la dheehdo halka ay deegaan ahaan ka soo jeedaan.
Waa loo ciqaabi dambiyada ay miskiinaddaas yar ka galeen sida aynu wada filayno iyo haddii ay Puntland caddaalad ku dhisan tahay. Haddii eex qabiil loo sameeyo xisaabtii dhabta ahayd iyo Xaakimkii xaqa ahaa baa ka horreeya.
Waxaa aad ugu wacnayd in iyaga oo nool inta geedo lagu istalaabo oo taranka laga wada jaro shimbiraha iyo dugaagga loo daayo.
Aden Yusuf says:
Gabdhii hore ee lixda nin loo dilay. Iyo tan waa isku mid waa in 10 eedaysane loo dilaa aan mid lasii dayn. Waayo gabar 12 jirta falka lagula kacay ee raga 40 jirka ku sameeyeen, wax aan dil ahayn laga jawaabi karo ma jirto.
NIMANKA ODAYADA SHEEGANAYA OO WAXAAS RALI KA AH ODAYO MAHA.